ရုံးခန်းသုံး Multi Drawer Cabinet
သင့်ရဲ့ ရုံးခန်းလေးကို အခြားသူနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရုံးခန်းမျိုး ဖန်တီးချင်ရင် အခုလို ဆန်းသစ်တဲ့အရောင်နဲ့ တွဲစပ်ထားတဲ့ Pwint Oo Furniture မှ Multi Drawer Cabinet လေးနဲ့ အလှဆင်လိုက်ပါ။Ball Bearing Slides ပါဝင်သောကြောင့် အံဆွဲဖွင့်လိုက်လျှင် အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားခြင်းမရှိပဲ အထိန်းပါရှိပါသည်။Clip-Lock ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အံဆွဲ အဖွင့် ၊ အပိတ်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်ရာတွင်လည်း မြန်ဆန်စေသည်။ပစ္စည်းများ၊စာရွက် စာတမ်းများ၊ဖိုင်တွဲများ နှင့် အရေးကြီးသည့် စာချူပ်များ ထားရာတွင် သေသေသပ်သပ်ဖြင့် တစ်နေရာတည်း စုစည်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံပြီး သင့်ရုံးခန်းကို လှပသပ်ရပ်အောင် အထောက်အကူပြုပေးသော ရုံးခန်းသုံး ဘီဒိုအံဆွဲဖြစ်သည်။ MD15B ( Price - 169000 ) 375(W) × 462(D) × 1324(H)mm Pwint Oo Showroom ~~~ No.127,Room No.A1,West Shwegondaing Road,Bahan Township,Yangon. Ph: 09796677555
Bristol Executive Office Desk- ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်လှပသည့် ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသုံးစားပွဲ
Office Culture ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ဆိုဖာ၊ အလူ မီနီယမ် တို့ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရုံးသုံး၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ် သည့် စားပွဲ နှင့်စာရေးခုံ ထိုင်ခုံ (Executive table)ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါ သည်။၄င်းစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံတို့ သည် လူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများတွင် အသုံးဝင်သော ပရိ ဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် Executive desks ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Office Culture ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါ သည်။
ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သေသပ် လှပ သော တံခါး များ ( Doors )
Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ် မျိုးဖြစ်သည့်် တံခါးများကို ဖြန့့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် အခြားသော အဆောက်အဦးများတွင် လည်း ၄င်း တံခါးရွက် ( Doors ) များကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ သေသပ်လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် အပြင် ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ် ထားသောကြောင့် ကြာရှည် အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ကြာရှည် အ သုံးခံပီး သေသပ်လှပသော တံခါးရွက် ( Doors ) များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Than Lwin Homemart ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Taiyo Steel furniture
Pwint Oo Furniture မှ Taiyo Steel furniture ကတော့ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ လုံးဝစိတ်ချထားသင့်တယ်နော်။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အရေးကြီးစာရွက်စာတန်း နဲ့ ဖိုင်များ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာတည်း လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။Steel Furniture ဖြစ်တာကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းနဲ့မှိုတက်ခြင်းများကိုကာကွယ်ပေးပြီး Standard Handle ပါဝင်တာကြောင့် သက်သောင့်သက်သာ အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။Key တွေမှာလည်း Anti - Bacterial Plastic Key Cap တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပြီး Key လည်း တော်ရုံနဲ့မပျက်နိုင်ပါဘူး အကြမ်းခံပါတယ်။THAI နိုင်ငံလုပ်ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် Quality Control ကတော့ ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သင့်ရုံးခန်း လှပသေသပ်မှုအတွက် ရုံးခန်းသုံး ဘီဒိုများမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပရိဘောဂအမျိူးအစားဖြစ်သည်။
ဒီ Office Set လေးမှာတော့ သဘာဝတရားရဲ့လှပမှုကို ခံစားနိုင်မယ့် သစ်သားနဲ့ စတိုင်လ်ကျစေမဲ့ အနက်ရောင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရုံးခန်းကို ပိုပြီး Romantic ဆန်စေပါလိမ့်မယ်...။သဘာဝသစ်သား စစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရေစိုခံပြီး မှိုတက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။ဈေးနှုန်းလည်း အသင့်တင့်ရှိပြီး အသုံးပြုရ သပ်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်။သင့်ရုံးခန်းကို သဘာဝအတိုင်း လှပသပ်ရပ်မှု၊ခိုင်ခံမှု နှင့် ကြာရှည်အသုံးခံသော ရုံးခန်းသုံး ပရိဘောဂစီးရီးလိုက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ 1. PEDESTAL (Price-175,000) W5PD662B (Size:47.2x51.6x60cm) 2. EXECUTIVE DESK (Price-208,000) W5DC1800K (Size:180x80x75cm) 3. CABINET (Price-195,000) W5CM800K (Size:80x40x160cm) 4. CABINET (Price-216,000)
ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် သေသပ် လှပသော ထမင်းစားပွဲ ဝိုင်းသုံး ကြိမ် ကုလားထိုင် ( Dining Chair )
Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည် သွေးကောင်းမွန်သည့် ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ထမင်းစားပွဲဝိုင်းသုံး ကုလားထိုင် ( Dining Chair ) ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းပစ္စည်းများသည် သေသပ်လှပပီး အရည်သွေးကောင်းမွန်သောကြိမ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြောင့် ခိုင်ခံ့သပ်ရပ် လှပပီး ကြာရှည် ခံပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ထမင်းစားပွဲ ဝိုင်းများတွင် ၄င်း ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သည့် ကုလားထိုင် ( Dining Chair ) ကို အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းများအနေဖြင့် ဝယ်ယူအ သုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ပြင် ၄င်းကုလားထိုင် ( Dining Chair ) သည် ကြိ်မ်ဖြင့် ပြု လုပ်ထား သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သက်သောင့် သက်သာရှိပီး ကျန်းမာရေးနှင့် လည်း ညီ ညွတ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကြိမ် ကုလား ထိုင် ( Dining Chair ) ဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ခိုင်ခံ့ သပ်ရပ် လှပပီး ကြာရှည်ခံသော ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မှန်တင်ခုံ ( Dressing Table )
Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီမှ အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်းသစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ( Dressing Table ) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ြး ဖင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၄င်း မှန်တင်ခုံသည် ( Dressing Table ) သည် ကြာရှည်အ သုံးခံပြီး သေ သပ်လှပ ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်တွင် အိမ်အလှဆင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သ ည့် မှန်တင်ခုံ ( Dressing Table ) ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့ပြင် ကျွန်း ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အတွက် ခိုင်ခံ့ပြီး ကြာရှည်ခံသည့် အပြင် ၄င်းမှန်တင်ခုံအောက်တွင် အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စ ည်းများပါ သိမ်းဆည်းရန် အတွက်လည်း အကန့် များပါဝင် ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ၄င်း မှန်တင်ခုံ Dressing Table ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြု အလှဆင်လိုပါက Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် သက်သောင့် သက်သာရှိသော ဒါရိုက်တာထိုင် ကုလားထိုင် ( Director Chair )
Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးမြင့် ကြိမ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေး ဒါရိုက်တာထိုင်သည့် ကုလားထိုင် ( Director Chair ) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းကုလားထိုင်သည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကြိမ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အပြင် ဒီဇိုင်းမှာလည်းသေသပ်လှပသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြု သင့်သည့် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်းကုလားထိုင် ( Director Chair ) သည် လူကြီးမင်းတို့ အနားယူ အပန်းဖြေရာတွင် သက်သောင့်သက်သာရှိပီး ကျန်းမာရေးနှင့် လည်းညီညွတ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဒါရိုက်တာ ထိုင်ခုံ ( Director Chair ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး သေသပ် လှပ ကြာရှည်ခံသော တီဗွီ တင်သည့် စင် ( TV Stand )
Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တွင်အသုံးပြုသော ပရိဘောဂပ စ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အရည်သွေးကောင်းမွန်သောကျွန်းသစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် တီဗွီတင်သောစင် (TV stand) ကိုတင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတီဗွီတင်သောစင်သည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် အခြားပစ္စည်းများ ကိုထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သော ဗီဒိုအသေးစားပါရှိပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေ နှင့် အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် တီဗွီတင်သောစင် (TV stand ) ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါ သည်။
ကြိမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ထမင်းစားပွဲ ဝိုင်းသုံး ကုလားထိုင် ( Inle Chair )
Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးေ ကာင်းမွန်သော ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကုလားထိုင် ( Inle Chair ) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အ တွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းကုလားထိုင်သည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ထမင်း စားပွဲခုံများတွင် ထိုင်ရန်အတွက် သေသပ်လှပသည့် ဒီဇိုင်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထား သည့် ကုလားထိုင် ( Inle Chair ) ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ဒါ့အပြင် ၄င်း ကုလား ထိုင် ( Inle Chair ) သည် ကြိမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပေါ့ပါးသပ်ရပ်ပီး ကျန်းမာရေး နှင့်လည်း ညီညွတ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ထမင်းစားပွဲ ကုလားထိုင် ( Inle Chair ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Monsoon Village ( Rattan Furniture ) ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်သုံး FACE TOWEL
အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်များတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော Face Towel နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။နူးညံသော အထိအတွေ့ နှင့် စိတ်ကြည်နူးမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်သည့် မျက်နှာသုတ် ပုဝါတစ်ခုဖြစ်သည်။အဖြူရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ကာ Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေသည်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်နှင့် Logo များကို Order မှာလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။အရည်အသွေးကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး သင့်၏အဆင့်မြင့် Hotel,Guest House နှင့် Motel များကို ကျွန်တော်တို့ MKS company မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်းများ တံဆိပ်များ နှင့် အရောင်အမျိူးမျိူးကို စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် Order များလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
အိမ်သုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် သပ်ရပ်လှပသည့် ကျွန်း ကုတင် ( Bed Stead )
Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်း သစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အိပ်ယာ ကုတင် ( Bed Stead ) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် တင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကြောင့် အရည် သွေးကောင်းမွန်ပြီးကြာရှည်ခံသည့် အပြင် သုံးစွဲရမှာ လည်း အသုံးဝင်သော အိမ်သုံး ပရိ ဘောဂပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့အပြင် ၄င်းကုတင် ( Bed Stead ) သည် လူကြီးမင်း တို့ အတွက် အသုံးဝင်သော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အပြင် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ကျန်း မာရေးနှင့် လည်းသင့်လျော်သော အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်် အရည်သွေးကောင်းမွန်ပီး ကြာရှည်ခံသည့် အိမ်သုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အိပ်ယာ ကုတင် ( Bed Stead ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Mya Nann Pon ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ နေအိမ်တွင် တင့်တယ်သပ်ပယ်သော ဘုရားစင် တစ်ခုဖြင့်အောင် ကျွန်တော်တို့ Myayadanar အိမ်တွင်းအလှဆင် ကျွန်းပရိဘောဂလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်သစ်၏ အရောင်နှင့် လှပသောဒီဇိုင်းများဖြင့် ပေါင်းဖက်လိုက်သောအခါ တင့်တယ်သပ်ပယ်သော ဘုရားစင် တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မည်ဖြင့်သည်။ Customer များမှာယူသော ပုံစံတိုင်းလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဆိုင်ကိုလည်းလာရောက်၍ အားပေးနိုင်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကိုယ်စလှယ်များလည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။
လှပသောအစည်းဝေးခန်းသုံး စားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်များ (Meeting Room, Table &amp; Chair)
Office Culture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော သစ်သား၊ အထပ်သားတို့ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရုံးခန်းသုံး၊ ကုမ္ပဏီအစည်းဝေးခန်းသုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် စားပွဲများနှင့်ထိုင်ခုံများကိုထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။ ဒါ့ပြင်Meeting room များအတွက်လူကြီးမင်းတို့့စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများလည်းရေးဆွဲပေးနေပါ သည်။ဒ့ါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့ ၏အစည်းဝေးခန်းများတွင်အသုံးပြုသင့် သည့် စားပွဲများနှင့်ထိုင်ခုံများကိုသာမက အစည်းဝေးခန်းသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ၏ဒီဇိုင်းပုံစံ များကိုပါ ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Office Culture ကုမ္ပဏီကိုိတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင် ပါသည်။